Nuhoo Goobanaa: 'Oromoon ammallee tokkummaasaatiin ala waan biraa hin qabu' - BBC News Afaan Oromoo
Wallisaa Oromoo beekamaa Nahoo Goobanaa wayita ammaa kanatti birmannaa akka barbadan maatiin beeksiisan.
Haati warraa artisti Nuhoo Goobanaa Aadde Maliikaa Alii, fayyaan Nuhoo Goobanaa ummata Oromoo harka jirti jedhu.
"Yoo gargaartan ni fayya. Kan barbaadnus qabeenya kennuu qofa miti. Dhufanii 'Nuhoo keenya maal keessa jirta' jedhanii yoo gaafatan inni ni fayya," jedhu Aaddee Maliikaan.
Wallisaa Nuhoo ummatasaa waan jaalatuuf sagalee ummataa dhagahuu fedha, jechuun akka abbaa warraasaaniif birmataniif dhaamsa dabarfataniiru haatii warraasaanii Aadde Malikaan.
Nuhoon dhukkuba sukkaaraafi dhiibbaa dhiigaa mudate gara istirookiitti cehee qaamasaa gara mirgaa sochoosuu dadhabsiiseera.
Tibba darbe baayyee dhukkubnisachuun kutaa yaala cimaa seenanii kan turan yoo ta'u, yeroo ammaa garuu itti fooyya'ee nyaata fudhachu eegaleera jedhu.
Sirboota qabsoofi jaalalaa akkasumas meeshaalee muuziqaa taphachuun kan beekamu artisti Nuhoo Goobanaa erga dhukkubsatee manattii hafee waggoota jaha ta'eera.
Tibbana ammoo dhukkubnisaa itti cimee Hospitaala waliigalaa Adaamaatti yaala argachaa jira.
Dhukkuba isa mudate kanarraa fayyee hojii aartii jaalatutti deebi'iuuf hawwii guddaa akka qabu BBC'tti hime.
"Ummanni Oromoo eessa jiraa laata? Maaf na irraanfatanii? Namni inuma du'a ammoo osoo jiranii yoo walgargaaran irra bareeda," jedhe Nuhoon.
Waggoota darban kanatti tumsa uummataatiin gargaaramuu kan himu Nuhoon, deeggarsa kanaaf galata qabus jedhe.
Waajjirri Olaanaa ABO Gullallee waggaa 27 booda deebi'e
"Yaa uummata Oromoo xiqqaafi guddaan sinin galatoofmadha. Kan qabullee kan hin qabnellee cufti nagargaaruu fedha. Warra nagargaaranis Rabbi haa ta'uufin jedha."
Nuhoon yeroo dhukkubsatee sireerra ciise kanattis Oromoon tokkummaan alatti fala kan biraa akka hin qabaanne dhaame.
"Tokkummaa gadi hin dhiisinaa. Har'as tokkummaan nu barbaachisa. Borus tokkummaan nubarbaachisa. Waan biraa hin qabdu Oromoon. Tokkummaa jabeessaa," jechuun dhaame.
Tibba kana hospitaalatti deddeebi'ee gargaaraa kan jiru Artisti Qamar Yusuuf gamasaatiin, Nuhoon yeroo namni Oromummaa isaallee qalbeefatee hin hubannetti nama sabboonummaa nubarsiise jedha.
"Tokkummaa TokkummaaYaa ilmaan Oromoo tokkummaaKiristaana islaamaan nugargar hin baanu Kun hojii waaqaati waaqumaaf haa dhiifnuOromummaa qofaan waliin haa dhaabbannu," jedhee tokkummaaf ummata dammaksaa ture jedha.
Sirbootaan uummata sochoosuun cinatti qabsoo keessattis wareegama guddaa kanfaluu yaadata.
"Nulleef abbaa ta'ee qabsoo nubarsiise. Akkatti aartiidhaan falmannu. Qabsoo uummata Oromootiifi Nuhoo addaan baasanii ilaaluun hin dandahamu. Jireenyasaa guutuu qabsuma Oromoo tanatti fixe," jedha Qamar.
Ar'as Oromoo tokkummaa qofatu isa baasa jedha Nuhoo Goobanaa. Na gaafadhaas jedheera.
Jecha Nuhoo 'Ummanni Oromoo gabrummaa jala taa'ee soorummaan ani barbaadu hin jiru' jedhuun akka Nuhoo yaadatus hima."Waa'een Oromoo yoo ka'e, waa'een bilisummaa yoo ka'e amma yeroo sireerra ciisu kanattillee imimmaan ijasaarraa hin dhabdu. Hagas takka uummatasaa jaalata.
Artsitiin oromoos jireenyasaa guutuu kanfale kuni dhibeedhaan yoo rakkatu gargaarsi hamma silaa maluuf yoo dhabu arguun 'qabsoon galata hin qabdu' nama jechisiisa jedha Qamar
Oromoon gargaarsa walirraa hin cinneen bira dhaabanne Nuhoo fayyummaasaatti deebisuu qabnas jedha.
Hanqina humnaatiif malee Nuhoo biyya alaa geessuun yaala argatee akka fayyuuf hawwii guddaa qabaachuu haati warraa isaa Aadde Malikaan BBC'tti himtee jirti.